Wararka - Miiraha hawada, ku raaxee nolosha cuntada caafimaadka leh
HAWADA HAWADA, KU NASHAJI NOLOSHA CUNTA CAAFIMAADKA
Ku raaxeysiga cuntada waa farxad weyn nolosha. Gourmets badan, cuntada la shiilay ayaa ah tan ugu cadcad, laakiin leh dhadhanka udgoon iyo dhadhanka, khibrada jilicsan iyo casiirka leh, cuntada la shiilay ayaa sidoo kale ah dambiilaha ugu weyn ee caafimaadka saameeya. Cunista cuntooyinka leh dufanka badan waxay culeys culus ku yihiin jirka. Marka, ma jiraan qalab wax lagu karsado oo suuqa yaal oo hanan kara dhadhanka iyo muuqaalka cuntooyinka la shiilay iyadoo yareyneysa dufanka?
SHAO HONG air fryer waa wax la mid ah oo u ogolaanaya caafimaadka iyo cuntada labadaba. Waxay leedahay astaamaha cunto karinta aan saliida lahayn, dufanka caafimaadka qaba iyo kuwa hooseeya, iyo nadiifinta otomaatiga ah. Qalabkan hawada, waxaad isla markiiba noqon kartaa khabiir ku takhasusay macmalka. Badeecadani waxay ka samaysan tahay maaddooyin ammaan ah oo heerka cuntada ah guud ahaan. Naqshadeynta gaarka ah ee 360-darajo-aan-dhimasha-wareegga ahayn ee naqshadeynta duufaanta waxay gaari kartaa kuleylka isku midka ah ee cuntada iyadoo aan la rogin. Isla mar ahaantaana, saddexda-xawaaraha naqshadeynta xawaaraha dabaysha ayaa dooran kara xawaaraha dabaysha ku habboon iyadoo loo eegayo qalabka cuntada ee kala duwan. Si weyn u gaabin waqtiga karinta. Intaa waxaa sii dheer, SHAO HONG hawada qalajiyaha ayaa had iyo jeer cunnada ku hayn kara xaalad dufan iyo saliid yar ku jirta, qufulka nafaqada ee gudaha ka soo xir, una keenaya laba jibaarayaasha caafimaadka.
SHAO HONG marawaxadaha hawada ayaa sameeyay naqshado badan oo feker leh. Adoo ku daraya giraan fidinta ahama, awoodda mashiinka hawada ayaa laga kordhin karaa 12L ilaa 17L, taasoo si weyn u kordhinaysa booska karinta; jirka muraayadda hufan ayaa si cad u arki karaya habka karinta. Wax walba gacanta ayaa lagu hayaa; marka lagu daro bacda wax lagu keydiyo, kaydinta aan boodhku caddayn ayaa ka habboon; isla mar ahaantaana, sheygan ayaa sidoo kale lagu qalabeeyaa heerkul-hawleed heer-kul sarreeya oo nadiifin ah, kaas oo si dhakhso leh uga takhalusi kara dufanka oo gebi ahaanba gacmahaaga xor ka ah.
Iyada oo ku saleysan fikradaha karinta caafimaadka leh iyo naqshadeynta wax soo saarka fekerka leh, SHAO HONG hawo-kariye had iyo jeer waa ay doorbidaan dadka isticmaala, waxayna sidoo kale heshay jawaab-celin wanaagsan oo suuq ah, gaaritaanka ujeeddada ah in karinta laga dhigo mid caafimaad iyo nolol fudud. Mustaqbalka, SHAO HONG waxay u hoggaansami doontaa fikradda cunno caafimaad leh saliid la'aan iyo saliid yar, waxayna siin doontaa dadka isticmaala khibrad cunto karis wanaagsan oo leh faa'iidooyin wax soo saar leh oo caan ah, naqshad soosaar leh, iyo qaabab cunto karis leh, iyo sidoo kale u oggolaan doonta dadka isticmaala si aad ugu raaxaysato nolol tayo sare leh oo caafimaad leh.